UMampintsha ushiywe yimenenja yakhe
UBABES noMampintsha emcimbini wabo wokuqala weBonnie aand Clyde Tour owawuseThe Warehouse eThekwini. Isithombe: SIGCINIWE
INTATHELI YESOLEZWE | August 29, 2019
SEKUPHELILE obekuhlanganisa umculi weGqom' uMampintsha nobesebenza njengemenenja yakhe entsha uLindo'Dogg DBN' Buthelezi.
Ekhuluma neTshisaLive uButhelezi uthe ushiye uMampintsha ngoba esewuqedile umsebenzi wakhe wokuguqula isithombe sakhe kubalandeli.
"Owami umsebenzi sengiwuqedile kanti futhi bengiwenza ngenhliziyo emhlophe. Ngiyajabula ukuthi uMampintsha usebuyele esimeni sakhe nokuthi useyaqashwa nasemicimbini futhi usemi kahle nasezimalini," kusho uDogg.
UDogg ungumnikazi wenkampani iFameUs esebenza ukwakha noma ukuguqula isithombe sosaziwayo kubalandeli. UButhelezi waqala ukusebenza noMampintsha ogama lakhe langempela nguMandla Maphumulo kulandela ukusabalala kwevideo yakhe ezinkundleni zokuxhumana eshaya uBabes Wodumo. UMampintsha wavulelwa icala lokushaya ngalesi senzo, naye uMampintsha wavulela uBabes icala lokushaya. Omabili agcina ehoxile enkantolo yeMantshi ePinetown kulandela ukwelulekwa kwabo yinhlangano exazulula izinkinga emndenini nakubantu abashadile.
Kube nezikhalo ezinkundleni zokuxhumana abantu bethi akangabe esaqashwa emicimbini futhi ungadlalwa nomculo wakhe emsakazweni uMampintsha. Phakathi komsebenzi owenziwe uDogg Durban, ukusungula imicimbi ewuchugechunge kaMampintsha noBabes, osihloko esithi 'Bonnie and Clyde Tour'.
Lezi zithandani zavela okokuqala njengoBonnie and Clyde eThe Warehouse emcimbini owaziwa ngeWine Wednesday ohlelwa nguyena uDogg.
#BonnieAndClydeTour 🔥🔥🔥 uMthatha @nongolozas_lifestyle 🎈🦶🎬💯🕺🔒🏀🐕🌪 Gates Open at 6pm 🚨🚨🚨🚨 #kwanyiwa ♠️ pic.twitter.com/KxUnJlHSOb
— S H I M O R A (@MampintshaNuz) August 23, 2019